Gaaritaanka7: Kaqeybgal dhageystayaasha luuqadaha badan ee Baraha Bulshada | Martech Zone
Gaaritaanka7: Kaqeybgal dhageystayaasha luuqadaha badan ee Baraha Bulshada
Khamiista, Febraayo 25, 2016 Jimco, Febraayo 26, 2016 Douglas Karr
Gaaritaanka7 waxay rabtaa in loo fududeeyo shakhsiyaadka iyo ganacsatadu inay ku ballaariyaan gaadhista bulsheed adduunka oo dhan. Reach7, adeegsadayaashu waxay aqoonsadaan oo ay la macaamilaan dhagaystayaasha ugu khuseeya warbaahinta bulshada si fudud oo hufan.
Mashruucoodu wuxuu ka caawiyaa dadka isticmaala inay ku dhisto dhagaystayaal ku habboon suuqooda maxalliga ah ama ay si wax ku ool ah ula shaqeeyaan si ay ula macaamilaan suuq caalami ah. Ganacsiyada ama shakhsiyaadka waxay ku qeexi karaan tweets in ka badan 80 luqadaha adduunka looga hadlo. 90% turjumaadaha waxaa lagu dhammeeyaa saacad gudahood, badiyaa daqiiqado gudahood.
Kobaca Maqalka - Ku koboci hawlgelinta la beegsanayo. Aqoonso dadka iyo waxyaabaha aad raaci karto, like iyo share.
Qiimeynta Daryeelka - Waqti ku badbaadi qiimeyntayada gaarka ah ee gaarka ah ee kuu soo bandhigta natiijooyinka ugu fiican.
Cabir Guul - Caddayntu waxay ku jirtaa weelka. U hel maalinle, tirakoob toddobaadle ah sida hawlgalkaagu u dhaliyey kuwa raacsan cusub.
Meel gaar ka dhig Twitter - Gaadho in ka badan 80 suuqyo + suuqyo leh tarjumaadda warbaahinta bulshada ee bilaa cilmiga ah ee lagu dhex dhisay.
Dhegeystayaasha Qaybta - U qaybi kooxaha aad bartilmaameedka u tahay ee ololaha si aad diiradda u saarto kooxaha kala duwan maalmaha kala duwan.
Research - Eeg raadadka tooska ah ee khadka tooska ah ee dhammaan dadka khuseeya sida LinkedIn, blog, Pinterest iwm.
Isku day Reach7 Bilaash
Gaaritaanka7 sidoo kale wuxuu leeyahay aHootsuite Plugin, si aad si toos ah uga isticmaali karto adigaHootsuite dashboard si aad u qorsheysato oo u daabacdo Tweets.
Reach7 waxay bixisaa seddex qorshe:
Qorshaha Bilowga, oo ah adeeg bilaash ah oo ku habboon shakhsiyaadka doonaya inay kordhiyaan ka qayb qaadashadooda warbaahinta bulshada.
Qorshaha oo buuxa, $ 19.99 / bishii, wuxuu ku habboon yahay ganacsiyada, shirkadaha e-commerce, iyo waaxyada iibka ee u baahan inay ka qayb galaan dhagaystayaasha la beegsanayo ee warbaahinta bulshada.
Ugu dambeyntiina, qorshaha Pro ee $ 59.99 / bishii ayaa ugu fiican ganacsiyada leh qaybo badan oo adeegsadeyaal ah oo ka badan hal suuq, iyo sidoo kale qorayaal iyo hay'ado yaryar.
Reach7 waxay leedahay in kabadan 5,000 oo macmiil ah, lambar maalin walba kora oo ay kamid yihiin shirkadaha sida Worldpay, Re / Max, Sharp, iyo Viking Direct.
Tags: plugin hootsuitetarjumaadda aadanahacaalamiluuqad badanLuqado badangaadho7warbaahinta bulshadahawlgelinta warbaahinta bulshadatarjumaadaTweetTwitterdeegaanka twitter
Hotjar: Heatmaps, Funnels, Recordings, Falanqaynta iyo Jawaab celinta